Maraoka: Lasa iraisam-pirenena ny Hip Hop · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2020 5:23 GMT
(Lahatsoratra nvoaka tamin'ny volana Novambra 2007)
Tamin'ity herinandro ity, tsy niresaka afa-tsy ny fivoahan'ny lahatsary fanadihadiana vaovao ny tontolon'ny bilaogy Maraokana – na tao an-toerana na tany ivelany – momba ny nampalaza vetivety ny hip hop tao Maraoka. Mitondra ny lohateny hoe “I Love Hip Hop in Morocco” (Tiako ny hip hop ao Maraoka) ilay sarimihetsika ary notontosain'i Joshua Asen, nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny Fulbright sy ilay mpanatontosa sarimihetsika Jennifer Needleman, izay nanaraka an'i Asen raha niara-miasa tamin'ireo mpanakanto teo an-toerana izy mba hikarakara ny fetiben'ny hip hop tamin'ny tanàndehibe miisa telo. Nanjary nalaza be tany Maraoka ny hip hop tato anatin'ny taona vitsivitsy; vao haingana no nipoitra tamin'ny dokambarotra lehibe nataon'i Maroc Telecom i H-Kayne sy Bigg – mpanakanto roa naseho tamin'ilay sarimihetsika.
Nahita ilay horonantsary tamin'ny faran'ny herinandro ary nizara ny heviny i Laila Lalami:
Manaraka tarika hip hop maromaro (H-Kayne, Fnaire, DJ Key, Bigg, Brown Fingazz, ary Fati Show) ny sarimihetsika rehefa nikasa ny hikarakara ny fetiben'ny hip hop any amin'ny tanàndehibe miisa miisa telo: Meknes, Marrakesh, ary Casablanca izy ireo. Niezaka nitady famatsiam-bola sy fanohanana ara-bola izy ireo, nanofa toerana, nahazo fahazoan-dàlana, nanao pirinty ireny taratasy kelinà dokambarotra ireny, nanao famerenan-kira ary raha nanaraka azy ireo izahay nandritra izany fotoana izany dia nahazo sary betsaka tamin'ireto mpanakanto ireto. Nitsidika an'i DJ Key tany an-tranony izahay ary nahafantatra ny fomba nialany tamin'ny asany tao amin'ny orinasa mpanao maritrano mba hifantoka tamin'ny hip hop. Henonay ny fomba nisafidian-dry zareo ny tononkirany. Ohatra, nandà ny hampiasa ny teny hoe ‘fuck’ (“Tsy miteny toa an'izany izahay) ny mpikambana ao amin'ny Fnaire raha ilay mpihira rap Brown Fingazz kosa niaro ny fampiasany ny teny hoe ‘nigga’ mba hilazany ny tenany sy ny namany ao amin'ny medina. Nizara ny tolona nataony izy ireo, indrindra tamin'ny fahalalahana miteny sy tamin'ny fanohanana ara-pitaovana. Niresaka ny fiainany manokana izy ireo. Tovovavy tanora mpianatry ny lisea any Fez no hany vehivavy mpihira rap ao amin'ny sarimihetsika, izay tohanan'ny ray aman-dreniny, nefa tsy maintsy mandresy (mahazo ny fon’) ny vahoaka rehefa miakatra an-tsehatra mandritra ny fetibe. Raha mahita ity horonantsary ity ianao any amin'ny fetibe akaiky anao, aza adinoina ny mijery izany.
Nizara tantara vitsivitsy momba ny hip hop Maraokana ny The Morocco Report:
Ho an'ireo izay tsy dia mahafantatra loatra ity karazana mozika ity dia jereo fotsiny izay tanàna lehibe any Maraoka (eny fa na dia ny tanàna kely koa aza) mba hahitana ireo ankizy mpanao akanjon-damaody hip-hop (fampiasa matetika ampianarina any an-tsekoly miteny Anglisy) miaraka amin'ny kasikety Yankees, maka tahaka ireo kintan'ny hip hop Amerikana, Frantsay ary ankehitriny Maraokana ankafizin'izy ireo.
Anisan'ireo MCs Maraokana malaza i Bigg, izay mahay miteny Anglisy ary mihira rap momba ireo olana atrehin'ny fireneny; H-Kayne, iray amin'ireo tarika tranainy avy ao Meknes, izay nipetrahako nandritra ny roa taona; ary Fnaire, tarika iray hafa hita ao amin'ilay horonantsary fanadihadiana.
Hoy ny fanehoan-kevitra tao amin'ilay lahatsoratra:
Nahita ny fandefasana voalohany ny ‘I Love Hip Hop in Morocco’ tany amin'ny Morontsiraka Andrefan'i Etazonia aho, Fetiben'ny Sarimihetsika Arabo any San Francisco. Tao i Josh Asen ary namaly fanontaniana momba ilay horonantsary izy. Tena tiako tokoa ilay horonantsary ary manantena aho fa mbola ho maro ny olona no handray matotra ny hevitry ny “diplaomasian'ny hip hop”. Raha tianao ity horonantsary ity dia jereo ny lahatsary ao amin'ny You Tube ‘Sling Shot Hip Hop’. Mitovy ny hevitra ambarany saingy momba ny tarika Hip Hop Palestiniana manodidina an'i Gaza, Amoron'i Jordana, Akka, Lid, Tel Aviv ary maro hafa no resahana ao. Niasa tamin'izany nandritra ny taona vitsivitsy ny Tale Jackie Salloum ary mitovy amin'ny ‘I Love Hip Hop in Morocco’ izany. Raha ny marina, nanontaniako an'i Josh momba izany taorian'ny fandefasana voalohany ilay horonantsary ary nilaza izy fa nanome aingam-panahy azy ny ‘Sling Shot’ tamin'ny fanatontosana ity horonantsary ity.
Nidera ny hetsika i Lalla Lydia:
Ahitana ny freestyle, ny slamming, ny DJ spinning, ny breaking ary ny fampisehoana mozika ataon'ireo mpanakanto malaza indrindra any Maraoka ireo fetibe toy ny Fetiben'ny Slam sy Klam any Fes (iray amin'ireo tanàndehibe arabo “nentim-paharazana” indrindra any Maraoka izay ahitana ny sehatry ny mozika manerantany mivoatra be toy izao) ary nahazo fanohanana avy amin'ny Amerikana vitsivitsy izay tonga teny an-toerana sy indrindra indrindra nahazo fanohanana avy amin'ny governemanta Amerikana tany Maraoka ihany koa. Tena mahafinaritra tokoa ny safidin'izy ireo ny hanatontosana ity horonantsary ity niaraka tamin'ny fanohanan'ny vatsim-pianarana Fulbright.
Naseho tao amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Iraisam-pirenena Queens any Queens, New York ny I Love Hip Hop in Morocco.